Malunga nathi -I-Hebei Finutra Biotech Co., Ltd.
IFinutra inikezela ukuba ngumthengisi odibeneyo wonikezelo lonikezelo lwehlabathi, sinika uluhlu olubanzi lwezixhobo kunye nezinto ezisebenzayo njengomvelisi, umhambisi kunye nomthengisi weSiselo sehlabathi, iNutraceutical, Ukutya, ukutya kunye noMzi mveliso weCosmeceutical.
Umgangatho, ukumiliselwa kunye nokulandelelwa ziintsika ezixhasa isiseko solwakhiwo kunye neenjongo. Ukusuka kwisicwangciso sokwenza, ukulawula, ukuvala kunye nengxelo, iinkqubo zethu zichazwe ngokucacileyo phantsi kwemigangatho ephezulu yeshishini.
Yasekwa ngonyaka ka-2005, iFinutra Biotech iye yabandakanyeka kwimpahla eluhlaza yokunyanga amayeza amaTshayina njengeshishini elifanelekileyo le-ISO. Ngo-2010, saququzelela iqela le-R & D kwaye satyebisa iindidi zeemveliso zeMicroencapsulated Carotenoids uthotho olufumanekayo njengamanzi abandayo anyibilikayo (CWS) umgubo, iintsimbi kunye nokumiswa kweoyile / i-oleoresin ukuhlangabezana nohlobo olubanzi lwezicelo zokwenziwa. Kwi-2016 simisele iFinutra Inc., samisa indawo yokugcina izinto e-USA. Inkonzo eyenziwe ngokwezifiso kwindlu ngendlu ukusuka kwigrama ukuya kwiitoni ukugcwalisa ukuhanjiswa okukhawulezileyo kunye nokuhlangabezana neemfuno zomthengi ngamnye.
Ubungcali bethu yinzuzo yakho, ngaphezulu kwe-350,000 yeenyawo-zemveliso kunye nendawo yokugcina, kunye nezicwangciso eziqhubekayo zokwandiswa, iFinutra iqinisekisa ukuzisa inqanaba eliphezulu lomgangatho kunye nenkonzo kubathengi abahlonitshwayo kwihlabathi liphela.